𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐕𝐬. 𝐌𝐨𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐀𝐩𝐩𝐬
Escorting the New Economy
Game တှေ Streaming လှငျ့ပွီးဆော့ကွမယျt
﻿အရသာပွတငျးပေါကျ App ရဲ့အသုံးဝငျပုံမြားt
5G ဆိုတာကတော့ တယျလီ�
သင့်လုပ်ငန်းကို မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာ ကြေငြာချင်ပြီဆိုလျင် သင့်အနေနှင့် ပထမဆုံးစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားမိမယ့်အရာက application ပဲရေးဆွဲမလား ဒါမှမဟုတ် website ပဲထောင်မလား ဒါမှမဟုတ်လည်း နှစ်ခုလုံးပဲလုပ်မလားပေါ့…
မိုဘိုင်းဝက်ဆိုဒ်နဲ့ အပ်ပလီကေးရှင်း ဒီတိုင်းကြည့်လိုက်ရင်တော့ ဆင်တူယိုးမှားဖြစ်ချင်စရာ…ဒါပေမဲ့ သင့်လုပ်ငန်းနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးကို ရွေးချယ်ဖို့ ဆိုရင်တော့ အချက်အလက်မျိုးစုံ(သင့် target audiences ၊ ဘက်ဂျက်၊ လုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ လိုအပ်တဲ့ features စသဖြင့်) ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်…
ဒီတော့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ မိုဘိုင်းဝက်ဆိုဒ်နဲ့ အပ်ပလီကေးရှင်း ဆိုတာဘာလဲ ??
မိုဘိုင်းဝက်ဆိုဒ်နဲ့ အပ်ပလီကေးရှင်း နှစ်ခုတို့ရဲ့ အကျိုးအမြတ်အနည်းအများကို ဝေဖန်အကဲမဖြတ်ခင် သူတို့နှစ်ခုရဲ့ခြားနားချက်ကို အရင်နားလည်ဖို့ လိုအပ်တယ်…နှစ်ခုလုံးရဲ့ တူညီတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ စမတ်ဖုန်းတွေ (iPhone, Android and tablets) ကနေ ၀င်ကြည့်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မိုဘိုင်းဝက်ဆိုဒ်ဆိုတာ တခြား HTML ပေ့ဂ်ျတွေပါဝင်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ၀က်ဆိုဒ်တွေနဲ့အလား တူညီပါတယ်…မိုဘိုင်းဝက်ဆိုဒ်နဲ့ ပုံမှန်ဝက်ဆိုဒ်တွေရဲ့ အဓိကကွဲပြားတဲ့လက္ခဏာရပ်ကတော့ desktop နဲ့ မတူတဲ့ ပိုပြီးသေးတဲ့ touch-screen interface အတွက် ဒီဇိုင်းဖော်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။
အခုဆိုလျင် 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑤𝑒𝑏 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 တွေဟာ ၀က်ဆိုဒ်များအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်အသစ်တစ်ခုလို ဖြစ်လာပြီ။ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑤𝑒𝑏 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 များသည် mobile-friendly ဖြစ်ရုံတင်မက၊ မည်သည့် device အရွယ်အစားနဲ့မဆို (desktop မှအစ tablet ၊ စမတ်ဖုန်းများအထိ) friendly ဖြစ်စေသည်။ တခြားဝက်ဆိုဒ်များကဲ့သို့လည်း မိုဘိုင်းဝက်ဆိုဒ်များသည် text content တွေ၊ data တွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေ ဖော်ပြပေးသည်။
Apps ဆိုတာကတော့ မိတ်ဆွေတို့သိကြတဲ့အတိုင်း browser ထဲဝင်ကြည့်မယ့်အစား သင့်ဖုန်းထဲမှာ ဒေါင်းလုပ်ယူ၊ install ထားတဲ့ အပ်ပလီကေးရှင်းဖြစ်တယ်။ အပ်ပလီကေးရှင်းတွေဟာ ၀က်ဆ်ိုဒ်တွေလိုမျိုး အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် data တွေ content တွေကြည့်နိုင်ပါတယ်…ဒါမှမဟုတ် အင်တာနက်မရတဲ့အချိန်လည်း offline ကြည့်လို့ရအောင် content တွေဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားနိုင်ပါတယ်…
ဒီတော့ ဒီနေ့ဆောင်းပါးရဲ့ အဓိက highlight ဖြစ်တဲ့ 𝑎𝑝𝑝 နဲ့ 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 (𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑖𝑣𝑒) 𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒 ဘယ်ဟာပိုကောင်းသလဲ??
နှစ်ခုထဲက ဘယ်ဟာရွေးမလဲဆုံးဖြတ်တဲ့အခါ အသင့်တော်ဆုံးရွေးချယ်မှုကတော့ သင့်နောက်ဆုံးဦးတည်ချက်ပန်းတိုင်ပေါ်မှာ မူတည်တယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့။
သင်ဟာ ဂိမ်းတစ်ခုရေးဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ သေချာပေါက် app ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်…အကယ်၍ သင့်ပန်းတိုင်က audience အများကြီးထံ mobile-friendly content တွေ ဝေမျှဖန်တီးချင်တာဆိုရင်တော့ မိုဘိုင်းဝက်ဆိုဒ်ကိုပိုရွေးချယ်သင့်တာပေါ့…
တစ်ချို့နေရာတွေမှာကျတော့ မိုဘိုင်းဝက်ဆိုဒ်ရော အပ်ပလီကေးရှင်းရော လိုအပ်နိုင်ပါတယ်…ဒါပေမဲ့ သေချာတာတစ်ခုကတော့ မိုဘိုင်းဝက်ဆိုဒ်တစ်ခု အဆင်သင့်မရှိဘဲ အပ်ပလီကေးရှင်းရေးဆွဲခြင်းဟာ အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။
ယေဘုယျပြောရရင် မိုဘိုင်းပေါ်မှာ စတင်ရှိချင်ပြီဆိုရင် မိုဘိုင်းဝက်ဆိုဒ်ဟာ သင်ဦးဆုံးစဉ်းစားရေးဆွဲသင့်ပြီး… အပ်ပလီကေးရှင်းကတော့ web browser တစ်ခုတည်းနဲ့ မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် ၀က်ဆိုဒ်ကမပေးနိုင်တဲ့ features တွေပါဝင်လာတဲ့အခါ ရေးဆွဲသင့်ပါတယ်…
𝑴𝒐𝒃𝒊𝒍𝒆 𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆 နဲ့ 𝑵𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆 𝑨𝒑𝒑𝒔 တို့ရဲ့ အားသာချက်များ
သင့်ပန်းတိုင်ဟာ marketing အတွက် public communications အတွက်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့မိုဘိုင်းဗျူဟာအတွက် မိုဘိုင်းဝက်ဆိုဒ်နဲ့ ခြေလှမ်းစတင်သင့်ပါတယ်…ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မိုဘိုင်းဝက်ဆိုဒ်ဟာ apps ထက် သိသိသာသာ မြင်နိုင်တဲ့ အားသာချက်တွေရှိပါတယ်…အားသာချက်တွေကို အောက်မှာအသေးစိတ်ရေးပြထားပါတယ်…
1. 𝐈𝐦𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐜𝐲 - မိုဘိုင်းဝက်ဆိုဒ်များမှာ ချက်ချင်းဆိုသလို ၀င်ကြည့်နိုင်ပါတယ်…မိုဘိုင်းဝက်ဆိုဒ်များမှာ users တွေဟာ browser တစ်ခုခုကနေ ချက်ချင်းဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အပ်ပလီကေးရှင်းကျတော့ users ဘက်မှ အရင်ဆုံး playstore သွား၊ ဒေါင်းလုပ်ရယူ၊ install သွင်းပြီးမှ app ထဲက အချက်အလက် အကြောင်းအရာတွေကို ကြည့်ရ၍ှုရပါတယ်…
2. 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 – မိုဘိုင်းဝက်ဆိုဒ်များကျတော့ ဘယ် Devices နဲ့မဆို လိုက်လျောညီထွေကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အပ်ပလီကေးရှင်းကျတော့ သီးခြား version တစ်မျိုးစီ ထုတ်ပေးဖို့လိုလာတယ် (e.g. IOS, Andriod)။
3. 𝐔𝐩𝐠𝐫𝐚𝐝𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 – မိုဘိုင်းဝက်ဆိုဒ်အများစုကိုကျတော့ ချက်ချင်း Update လုပ်ပေးနိုင်သည်။ ၀က်ဆိုဒ်မှ ဒီဇိုင်းတွေ စာတွေ တစ်ခုခုပြင်ချင်ရင် edit လေးနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ ပြင်ပြီးသားတွေကို user ဘက်မှ ချက်ချင်းမြင်ရနိုင်ပါတယ်။ App ကို Update လုပ်ဖို့ကျတော့ users တွေကို version အသစ်ရပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးရအုံးမယ်…ပြီးသွားရင်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ဒေါင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်…
4. 𝐑𝐞𝐚𝐜𝐡 – မိုဘိုင်းဝက်ဆိုဒ်ဆိုတာ အလွယ်တကူဝင်ကြည့်၍လည်းရတယ်…ပြီးတော့ ခဏခဏလည်း ဒေါင်းလုပ်လုပ်စရာမလိုတော့ app ထက်စာရင် လူအများကြီးထံ ရောက်နိုင်တယ်
5. 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐂𝐲𝐜𝐥𝐞 – လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ userတွေရဲ့ ဖုန်းထဲမှာ app တစ်ခုက ရက် ၃၀ တောင် ကြာကြာမခံပါဘူး…သင့်ရဲ့ app ဟာ users တွေအတွက် တကယ်ထူးခြားပြီး အသုံးဝင်တယ်ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့…
မိုဘိုင်းဝက်ဆိုဒ်များကျတော့ user တွေက ဖျက်ပစ်လို့လည်းမရသလို အချိန်မရွေးနေရာမရွေး ပြန်လာကြည့်လို့လည်း ရပါတယ်…
6. 𝐀 𝐌𝐨𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐂𝐚𝐧 𝐛𝐞 𝐚𝐧 𝐀𝐩𝐩!
ပုံမှန်အပ်ပလီကေးရှင်းကဲ့သို့ပင် မိုဘိုင်းဝက်ဆိုဒ်များကို database-driven web applications များအဖြစ် ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်…ဒါကြောင့် မိုဘိုင်း web application တွေဟာ ပုံမှန် အပ်ပလီကေးရှင်းတွေကို လက်တွေ့အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။
7. 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐨𝐬𝐭 - ဒါကတော့ သိသာပါတယ်…မိုဘိုင်းဝက်ဆိုဒ်တစ်ခုရေးဆွဲခြင်းဟာ အပ်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုထက်စာရင် အချိန်ရောငွေကြေးရော သက်သာစေပါတယ် (အထူးသဖြင့် သင်ဟာ platforms အမျိုးမျိုးမှာ ရှိဖို့လိုအပ်နေတာကြောင့် အပ်ပလီကေးရှင်းတွေကို version မျိုးစုံထုတ်ရတဲ့အခါ)
8. 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐚𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞
app လား website မှာလား ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ စတင်စဉ်းစားတဲ့အခါ launch လုပ်တဲ့အဆင့်နဲ့ပဲ ပြီးဆုံးမသွားပါဘူး… အပ်ပလီကေးရှင်းကို ဆက်လက် maintain လုပ်ရမယ့် စရိတ်က ၀က်ဆိုဒ်တစ်ခုကို support လုပ်ရမယ့်စရိတ်ထက် ပိုပြီးကုန်ကျစရိတ်များပါတယ်…
ဒါဆို အပ်ပလီကေးရှင်းကျ ဘယ်အချိန်ရွေးချယ်ကြမလဲ??
မိုဘိုင်းဝက်ဆိုဒ်တွေဟာ အားသာချက်ဘယ်လောက်ပဲရှိရှိ အပ်ပလီကေးရှင်းတွေမှာလဲ သူ့ဟာနဲ့သူတော့ ကောင်းကွက်တွေရှိပါတယ်…မိုဘိုင်းဝက်ဆိုဒ်တွေမှာ ဘယ်လိုပဲ ရှိရင်းစွဲ ကောင်းကျိုးတွေ ရှိနေသော်ငြား အပ်ပလီကေးရှင်းတွေဟာ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်စေရတဲ့ အခြေအနေတွေ အကြောင်းပြချက်တွေလည်း အများကြီး ရှိပါသေးတယ်…ယေဘုယျပြောရရင် သင့်အောက်ဖော်ပြပါ အချက်တွေထဲက တစ်ခုခုလိုအပ်ရင် အပ်ပလီကေးရှင်းရွေးချယ်ရန်သင့်တော်ပါတယ်…
1. 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐲/𝐆𝐚𝐦𝐢𝐧𝐠 – ဒါပြောစရာတောင်မလိုပါ…interactive games တွေ ရေးဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အပ်ပလီကေးရှင်း ရွေးချယ်ရမှာပေါ့ (Angry Birds တို့ Mobile Legends တိုိ့ကို နမူနာယူ စဉ်းစားကြည့်ပါ)…
2. 𝐑𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐔𝐬𝐚𝐠𝐞/𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 – သင့် target users တွေဟာ သင့် app ကို သူတို့ ကိုယ်ပိုင် format နဲ့ ပုံမှန် အသုံးပြုမယ်ဆိုပါက အပ်ပလီကေးရှင်းဟာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု အဖြစ်ပေးနိုင်တယ် (EverNote ဖြင့်နမူနာစဉ်းစားကြည့်ပါ)
3. 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐱 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐨𝐫 𝐑𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 – အကယ်၍ သင်ဟာ data တွေ အများကြီးပါဝင်ပြီး ရှုပ်ထွေးတဲ့အတွက်အချက်တွေ charts တွေ reports တွေကို ကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့တစ်ခုခု လိုအပ်ရင်တော့ (banking တွေ investment လုပ်ငန်းတွေနဲ့ စဉ်းစားကြည့်ပါ) အပ်ပလီကေးရှင်းတွေဟာ ထိရောက်စွာ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်
4. 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐅𝐮𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐫 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐑𝐞𝐪𝐮𝐢𝐫𝐞𝐝 - မိုဘိုင်းဝက်ဆိုဒ် browsers တွေဟာ click-to-call, SMS နဲ့ GPS စတဲ့ functions တွေ ရယူရန် တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်လာပါပြီ….သို့သော်လည်း သင်ဟာ user ရဲ့ ကင်မရာထဲ ၀င်ရောက်ဖို့ (ဒါမှမဟုတ်) or processing power ရဖို့ ဆိုရင် application ဟာ ပိုထိရောက်စေပါတယ်…
5.𝐍𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐑𝐞𝐪𝐮𝐢𝐫𝐞𝐝 – သင်ဟာ network/wireless connection မရှိဘဲ functions တွေလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး contents တွေ offline ရယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အပ်ပလီကေးရှင်းရွေးချယ်သင့်ပါတယ်
တစ်ခြား projects တွေကဲ့သို့ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် အပ်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု ရေးဆွဲပြီဆိုရင် သင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအလျောက် အကောင်းဆုံး အများဆုံး returns ပြန်ရသင့်တယ်…သင် လုံးဝသတိပြုရှောင်ရှားသင့်တဲ့အရာက မိုဘိုင်းဝက်ဆိုဒ်လေးတစ်ခုရှိရုံနဲ့ ပြီးမြောက်နိုင်တဲ့ အခြေခံအချက်အလက်တွေ ဖော်ပြဖို့ အပ်ပလီကေးရှင်းကို အကုန်အကျခံပြီး ရေးဆွဲရန် မလိုအပ်ပါ…
အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ၀က်ဆိုဒ်နဲ့ အပ်ပလီကေးရှင်းမှာ တစ်ခုတည်းပဲ ရွေးချယ်အသုံးပြုရန် မလိုအပ်ပါ…လုပ်ငန်းအများစုဟာ web ပေါ်မှာရှိနေချင်၍ mobile-friendly ၀က်ဆိုဒ်တစ်ခု ဖွင့်ထားတတ်ကြသလို တခြားသူတို့လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်တွေ လိုက်ဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ အပ်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုလည်း ရှိကြတယ်…
အချုပ်ဆိုရသော် မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုနှုန်းက ကမ္ဘာအနှံများပြားလာသည်နှင့်အမျှ မိုဘိုင်းအင်တာနက်ပေါ်မှာ နေရာတစ်ခုရှာဖွေရန် “App Vs. Webᴇʙ” ဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာ လုပ်ငန်းများအတွက် စဉ်းစားစရာတစ်ခုအဖြစ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်…နောက်ဆုံးပြောရရင်တော့ မိမိလုပ်ငန်းအတွက် မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်စေရန် အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်တွေ ထည့်သွင်းစဉ်းစာပြီးမှ သေချာရွေးချယ်စေချင်ပါတယ်…